Birta dahaarka Birta, silig mesh Glass, Mesh buuxiyey - Shuolong
XY-2222G Birta mesh Fabric for Screen & Cabi ...
XY-2413P Architectural mesh Fabric for Mesh Par ...
Iyadoo in ka badan 12 sano oo waayo-aragnimo ballaadhan leh loo tolay mesh birta la isku qurxiyo, kala-duwanaanta ballaadhan ee alaabooyinka iyo ikhtiyaarrada habayntu waxay noo oggolaaneysaa inaan taageerno marxaladda naqshadeynta hore. Tani waxay ka dhigeysaa mashruuca inuu helo labadaba waxqabad shaqeynaya & qurux badan.
Badanaa waxay u adeegtaa injineernimada dhismaha adduunka & shirkadaha qandaraaska iyo machadyada qaabeynta qaab dhismeedka.
Iyadoo in ka badan 12 sano oo waayo-aragnimo ballaadhan leh loo tolay mesh birta la isku qurxiyo, kala-duwanaanta ballaadhan ee alaabooyinka iyo ikhtiyaarrada habayntu waxay noo oggolaaneysaa inaan taageerno marxaladda naqshadeynta hore.
ShuoLong mesh biraha waa soo saare shahaado yaqaan ISO ah, wuxuu diiradda saarayaa wax soo saarka
Birta Qurxinta Birta Qurxinta
Ahama Steel mesh
Canopy Birta Mesh
Birta mesh facade Cladding
XY-2414G Dahab bir bir ah oo birta loogu talo galay oo lagu qurxiyo ...